EA052 - OMG Ngwongwo Nweta Ntanetị Mkpuchi Ntinye ikuku | Ngwọta OMG
EA052 - Ngwaọrụ Mkpuchi Ọkụ Onwe Gị, Onye Ubi ikuku nke OMG
Gwa ndị enyị na ndị ezinụlọ gị akpaghị aka site na izipu ozi ederede dị ngwa na oku ịkpọ oku ihe ruru kọntaktị 3 nwere ebe GPS
IOS gam akporo dakọtara na ntuziaka Onye ọrụ
Ejiri batrị dochie anya ya gụnyere Ndụ Afọ 1
Enyemaka Naanị bọtịnụ pịa: Ro webata Ngwaọrụ Nzaghachi Mberede Na Onwe Onye, obere igwe wearable na-arụ ọrụ na ama iji mee ka mkpu ma zipụ oku ozugbo na ozi ederede site na iji bọtịnụ. Kpọsaanụ enyemaka n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ ya. Ngwaọrụ a bụ ngwaọrụ emebere emebere nke ọma nke enwere ike iburu ya n’akpa n’akpa ma ọ bụ n’akpa, ma ọ bụ jiri otu n’ime ọtụtụ ngwa dị ka pendan, aka nkpa, ma ọ bụ eriri bel (na-eresị iche).
Teknụzụ kachasị ọhụrụ: Site na iji teknụzụ Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0 LE), Ngwaọrụ ahụ na-ebido oku na ederede ozi site na ama ama ama (iOS ma ọ bụ gam akporo). Site na iji otu bọtịnụ, Ngwaọrụ ziga iwu na ama gị ka nyefee ọnọdụ gị yana ozi ederede ahaziri onwe gị nke ndị atọ ahọrọla. Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịmalite ịkpọ ekwentị site na ama ama gị iji hụ na ị ga-enweta nlebara nke ndị ịkpọtụrụ gị.
Udo nke Uche: Ngwaọrụ ahụ nwere njiri ọdịda nke ga-eziga ma ọ bụrụ na ọ chọpụta ọdịda dara ada nke nwere ike ịhapụ onye ọrụ enweghị ike ịpị bọtịnụ njikere. Igwe mmiri, Akụrụngwa na-arụ ọrụ na mmiri ịsa ahụ ma na-enwe ahụ. Ọ dịghị mkpa ị fanye ya ka ọ na -eme ihe ruru otu afọ nke iji eme ya tupu ịmalite iji dochie batrị.
Ederede & Oku: Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, Ngwaọrụ na-ebunye iwu na ama gị ka ziga ozi ederede na kọntaktị echetara gị, site na oku ekwentị. Nke a na omume njikere bụ kpam kpam ahaziri.
Ọnọdụ GPS: Na mgbakwunye na ozi ederede njikere na ekwentị oku, enwere ike izipu ọnọdụ nke ekwentị gị na kọntaktị mberede gị.
Nchọpụta ọdịda: Onye ọrụ nwere ike gbanye nchọpụta nchọpụta iji mee ka a na-ezipụ njikere na-akpaghị aka mgbe otu nkeji gachara.
Ikuku iche: Ngwaọrụ ahụ ga-anọrịrị n'etiti ama ama gị ịrụ ọrụ. O nwere eriri ikuku di ruo 22 mita n'ime ma ọ bụ ruo 90 mita n'èzí na-eji Bluetooth 4.0.
Ndụ Batrị: Ngwaọrụ a nwere ihe ruru otu afọ nke ndụ batrị ma nwee batrị CR2032 ọkọlọtọ. Wepu batrị na onye ọrụ nwere ike dochie ya.
waterproof: Ezigbo maka ịsa ahụ ma ọ bụ mgbatị ahụ siri ike, Ngwaọrụ a anaghị egbochi mmiri ruo 1 mita nke omimi ruo nkeji iri atọ.
Gburugburu -lọ Nche: Ọ bụrụ na Ngwaọrụ si na mpaghara dịpụrụ adịpụ pụọ na smartphone ahụ, ngwaọrụ abụọ ahụ ga-enweta ọkwa na ntị.
Obere & kọmpat chepụtara: Naanị okirikiri 3.3 cm, ngwaọrụ a nwere ike ịbanye na nkasi obi ebe ọ bụla ịchọrọ iyi ya.
Ọnọdụ Silent: Maka iji dị ka mkpu mkpu ma ọ bụ bọtịnụ ụjọ, onye ọrụ nwere ike rụọ ọrụ Ọnọdụ Silent na ngwa iji gbanyụọ mkpu ma ọ bụ ngosi ngosi.
A gam akporo & iOS dakọtara: Ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ na iPhone 4S / iOS 7 ma ọ bụ nke ọhụụ na ama ọ bụla na-eji gam akporo 4.3 ma ọ bụ ndị ọhụrụ nwere Bluetooth 4.0.
size: 32 mm, dayameta 10 mm
arọ: 8 grams
Gburugburu: Igwe anaghị egbochi mmiri ruo 1 mita maka nkeji 30
Ndụ Batrị: Ruo otu afọ dabere n'iji ya
Battery Type: Etinyego ma dochie batrị CR2032 (nke a na-ahụkarị)
Ogo: Teknụzụ Bluetooth 4.0 na-enye ohere maka ihe ruru mita 22 n'ime ụlọ yana ruo 90 mita n'èzí n'etiti Ngwaọrụ na ama
Ngwa: Wristband na pendant / keychain tinyere na igbe (a naghị etinye eriri olu).)
Nzuzo 575 7 Echiche Taa
Companion Nchekwa - Ngwaọrụ Ịgba Ọsọ Mberede
EA005 - OMG Wireless Driveway Alert